VAKY TRANO TENY ANKANDINDRAMAMY : Jiolahy iray voasambotra, karohina ny namany roa
Velon-taraina nohon’ ny vaky trano misesilany eny amin’ny manodidina an’Ankadindramamy sy ny eny Mahazo, eto an-drenivohit’Antananarivo ny mponina mipetraka eny. 13 septembre 2019
Faritra mena amin’ny asan-jiolahy ny tanàna ary saika misy vaky trano sy asan-jiolahy mahery vaika matetika. Tamin’ity fotoana ity dia fivarotana indray no nisy namaky saingy voasoroka mialoha ihany rehefa tonga haingana ny Polisy mpanao fisafoana. Tovolahy iray 24 taona hatreto no fantatra fa voasambotry ny Polisy miasa ao amin’ny CSP8, tokony ho tamin’ny 08 ora alina teny Ankadindramamy noho ny filazana fa tompon’antoka tamin’ilay resaka vaky trano niseho.
Raha ny angom-baovao voaray omaly dia fivarotana iray teny Ankadindramamy no nisy namaky tokony ho tamin’ny 08 ora alina. Telo lahy ireto namaky ny fivarotana ireto ka rehefa tsikaritry ny tompon’ny tsena fa misy manapitsoka ny varavarana avy hatrany dia niantso Polisy ny tenany, ka tonga teny an-toerana avy hatrany ny mpitandro filaminana. Rehefa nahita ireo Polisy anefa ireto jiolahy dia nirifatra nandositra ka ny iray tamin’izy ireo no tra-tehaka rehefa nifanenjehana. Rehefa natao ny fanadihadiana azy dia nisy vola dimy alina ariary very tao amin’ilay trano fivarotana ary ity farany izay voasambotra no nahitana io lelavola io.
Niaiky araka izany ity farany izay voasambotra fa nanao izany vaky trano izany ary mbola eo am-pikarohana ny namany roa hafa ny Polisy ankehitriny. Ao anatin’ny famotorana lalina mahakasika ny raharaha ny mpitandro filaminana amin’izao fotoana izao. Eo anatrehan’ireo trangana tsy fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra Antananarivo dia tsy mitsahatra manao antso avo amin’ny vahoaka ny eo anivon’ny Polisim-pirenena mba hanome loharanom-baovao azy ireo mialoha raha sendra ka misy tranga mampiahiahy. Ho fisorohana ny loza mety hiseho ary koa fiarovana ny vahoaka sy ny fananany no tanjona.
Banner lehibe Gauche 200px × 200px (68235) 24 février 2020 Banner faharoa 500px x 70px (647) 24 février 2020 Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (402) 21 février 2020 Tafakatra 150 000Ariary ny saran-dalana POTIKA TANTERAKA NY LALAM-PIRENENA RN1 BIS (178) 21 février 2020 Lehilahy 01 nanolana zazavavikely miisa 02, misandoka ho tsy salama saina ANDAPA (92) 20 février 2020 Tovolahy iray naratra voafaokan’ny moto, nitsoaka ny nahavanon-doza ANKADIKELY ILAFY (83) 21 février 2020